SANTI | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
18,008 visits since 15JUNE2009
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း MIRINAE ဗီယက်နမ်ကမ်းခြေအားစတင်ဖြတ်ကျော်လျှက်ရှိ
November 2, 2009 — mmweather
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း MIRINAE သည် ယနေ့နံနက် ဝ၆း၃ဝ နာရီ JTWC data များအရ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Phu Yen ပြည်နယ်၊ Tuy Hoa မြို့ ကမ်းခြေ၏ အရှေ့ဘက် မိုင် ၁ဝဝ ခန့်သို့ ရောက်ရှိဗဟိုပြုနေပြီး အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၁၈ မိုင်နှုန်းဖြင့် ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ ဗီယက်နမ်ကမ်းခြေအား စတင် ကျော်ဖြတ်လျှက် ရှိနေပါသည်။ မြန်မာစံတော်ချိန် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် ကမ်းခြေမှ ၅၅ မိုင်ခန့် ၊ မြို့တော် ဟိုချီမင်း၏ အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၂၈ဝ ခန့်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
မုန်တိုင်း MIRINAE သည် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၅ဝ မှ ၆၅ မိုင်နှုန်း အထိ ရှိနေပြီး နောက် ၁၂ နာရီအတွင်း ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် အားပျော့ပျက်ပြယ်သွားနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 23W, MIRINAE, SANTI, tropical-storm, weather. 1 Comment »
October 30, 2009 — mmweather
ဖိလစ်ပိုင်တွင် ည ၈ နာရီမှ နံနက် ၈ နာရီအထိ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE (SANTI) ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်ခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်စဉ် လေတိုက်နှုန်း အနည်းဆုံး တစ်နာရီ ၁၆၅ ကီလိုမီတာ (၁ဝ၂ မိုင်နှုန်းခန့်) ဖြင့် တိုက်ခတ်မှာဖြစ်ကြောင်း ဖိလစ်ပိုင် မိုးလေဝသဌာနမှ သတိပေးချက်များထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
မုန်တိုင်း၏ လမ်းကြောင်းမှာ ယမန်နေ့ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် ခန့်မှန်းထားချက်မှ သိသာစွာပြောင်းလဲ ခြင်းမရှိဘဲ မုန်တိုင်းမျက်စေ့သည် ယနေ့ည ဖိလစ်ပိုင်စံတော်ချိန် ၈ နာရီမှ နောက်တစ်နေ့ နံနက် ၈ နာရီအထိ ယင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။
click on picture to view original size
အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၆း၃ဝ နာရီ (00:00 GMT) တွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဆက်လက် ဝင်ရောက်လာသည့် အခါ MIRINAE သည် အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး ဗီယက်နမ်ကမ်းခြေကို နိုဝင်ဘာ ၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆း၃ဝ နောက်ပိုင်း (00:00 GMT) တွင် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားရာ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်နေ့ (တနင်္လာနေ့) တွင် ၄င်း၏ အခြေအနေအားဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ – လာမည့် ရက်သတ္တပတ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသများတွင် အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာသွန်းပြီး မိုးကြီးနိုင်မည့် အခြေအနေသည် MIRINAE တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း မည်ကဲ့သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားဦးမည်၊ အင်အားလျော့ကျ(သို့မဟုတ်) ပိုကောင်းလာမည် စသည့် အချက်များပေါ်တွင် မူတည်နေပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: MIRINAE, SANTI, typhoon, weather. LeaveaComment »
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE ယနေ့ညနေပိုင်းတွင်ဖိလစ်ပိုင်ကိုဝင်တော့မည်
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE (SANTI) သည် မနီလာမြို့အရှေ့-အရှေ့မြောက်ယွန်းယွန်း မိုင် ၃၂ဝ ခန့်တွင်ရောက်ရှိဗဟိုပြုနေပြီး လွန်ခဲ့သော ၆ နာရီအတွင်း တိုင်းတာရရှိချက်များအရ အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၂ဝ နှုန်းခန့် (၁၇ နော်တီကယ်မိုင်နှုန်း) ဖြင့် ဆက်လက် ရွေ့လျားလျှက် ရှိနေပါသည်။ မုန်တိုင်းသည် အဆင့်-၂ (CAT2)အခြေအနေတွင်ရှိနေပြီး လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၁ဝ၅ မိုင်မှ ၁၂၅ မိုင်အထိရှိမှာဖြစ်ကြောင်း WUND ၏ ပုံဖေါ်တင်ပြမှုတွင် အောက်ပါအတိုင်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
လာမည့် ၁၂ နာရီအတွင်း အောက်တိုဘာလ ၃ဝ ရက် သောကြာနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဖိလစ်ပိုင်အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေအား စတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တော့မည်ဟု TSR ခန့်မှန်းချက်အရသိရပါသည်။
Daet (14.2 N, 122.9 E) San Jose (15.8 N, 121.5 E) Manila (14.6 N, 121.0 E) မြို့များအတွက် တိုက်ခတ်ခံရမှု ဖြစ်နိုင်ချေ ၅ဝ% မှ ၆၅% အထိရှိလာကြောင်း၊ အနီရောင်အဆင့် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: MIRINAE, SANTI, typhoon, weather.2Comments »
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE (SANTI) တောင်ဘက်ထပ်ဆင်း
October 29, 2009 — mmweather
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE (SANTI) 23W သည် ယနေ့ 0600 GMT တွင် ရရှိသော အချက်အလက်များအရ လမ်းကြောင်း ခန့်မှန်းချက်မှာ တောင်ဘက်သို့ ၂၅ မိုင်ခန့် ထပ်မံကျဆင်းကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
MIRINAE သည် မနီလာမြို့၏ အရှေ့ဘက် ၅၆ဝ နော်တီကယ်မိုင် (၆၂၅ မိုင်ခန့်)တွင်ရောက်ရှိဗဟိုပြုနေပြီး အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၂ဝ နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားနေပါသည်။ ရွေ့လျားနှုန်းပိုမို မြန်လာသည့်အတွက် ဖိလစ်ပိုင် အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေအနီးသို့ ပိုမိုစောစီးစွာ ရောက်လာလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၁ဝ၅ မိုင်မှ ၁၂၅ မိုင်နှုန်း အထိရှိသော လေပြင်းများသည် လာမည့် ၃၆ နာရီ အတွင်း ၄င်းနိုင်ငံ၏ အရှေ့ဘက် ကမ်းခြေသို့ စတင် တိုက်ခတ်လာနိုင်ဘွယ်ရှိနေပါသည်။ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ဆူးဘစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အနီးမှ ဖြတ်၍ တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်မည့် MIRINAE သည် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂ နာရီမတိုင်မီမှာပင် ဗီယက်နမ်ကမ်းခြေကို ဆက်လက် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
လမ်းကြောင်းပုံဖေါ်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း ပုံကို click လုပ်၍ ကြည့်ပေးပါရန်
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: 23W, MIRINAE, SANTI, typhoon, weather. LeaveaComment »
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE (SANTI)(23W) update#3
October 28, 2009 — mmweather
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE (SANTI) ဟာ လာမဲ့ ၄၈ နာရီအတွင်း ဖိလစ်ပိုင်အရေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ ၂၁၅ မိုင်ကွာဝေးတဲ့ နေရာကို အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်နဲ့ ချဉ်းကပ်ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
မုန်တိုင်းဖြတ်သန်းမဲ့လမ်းကြောင်းဟာ ယခင် အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က ခန့်မှန်းထားတဲ့ လမ်းကြောင်းရဲ့ မြောက်ဘက် မိုင် ၅ဝ ခန့်ကို ရောက်သွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိလမ်းကြောင်း ခန့်မှန်းချက်အရ Santiago မြို့ အနီးမှ ကပ်ပြီးဖြတ်ကျော်မယ်လို့လဲ data ပုံဖေါ်ရရှိချက်တွေအရသိရပါတယ်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE (SANTI) ဟာ လာမဲ့ ၄၈ နာရီအတွင်း ဖိလစ်ပိုင်အရေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ ၂၁၅ မိုင်ကွာဝေးတဲ့ နေရာကို အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်နဲ့ ချဉ်းကပ်ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မုန်တိုင်းဖြတ်သန်းမဲ့လမ်းကြောင်းဟာ ယခင် အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က ခန့်မှန်းထားတဲ့ လမ်းကြောင်းရဲ့ မြောက်ဘက် မိုင် ၅ဝ ခန့်ကို ရောက်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိလမ်းကြောင်း ခန့်မှန်းချက်အရ Santiago မြို့ အနီးမှ ကပ်ပြီးဖြတ်ကျော်မယ်လို့လဲ data ပုံဖေါ်ရရှိချက်တွေအရသိရပါတယ်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MIRINAE ဟာ နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ သတင်းတွေအရ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီကို ၉၅ မှ ၁၂ဝ မိုင်နှုန်းအထိရှိတဲ့ အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဖြစ်နေပြီး ကြာသပတေးနေ့ ဂျပန်စံတော်ချိန် ညနေ ၃ နာရီမှာ အားပိုကောင်းလာပြီး အဆင့်-၃ တိထရောက်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်၊ ရွေ့လျားနေတဲ့ ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းအနေနဲ့လဲ အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ကာ တစ်နာရီကို ၁၉ မိုင်နှုန်းနဲ့ ရွေ့လျားနေကြောင်းသိရပါတယ်။
Current Conditions : 81F / 27C, Mostly Cloudy - 11:30 PM +0630 Jul. 21
Temperature: 81°F / 27°C | Humidity: 94% | Pressure: 29.74in / 1007hPa (Falling) | Conditions: Mostly Cloudy | Wind Direction: SW | Wind Speed: 2mph / 4km/h
Forecast for Saturday as of Jul. 21 11:56 PM +0630
Thunderstorm. High:85 ° F. / 29 ° C.
Forecast for Sunday Night as of Jul. 21 11:56 PM +0630
Thunderstorm. Low:77 ° F. / 25 ° C.
Current Conditions : 86F / 30C, Overcast - 6:30 PM MMT Jul. 21
Temperature: 86°F / 30°C | Humidity: 63% | Pressure: 29.60in / 1002hPa () | Conditions: Overcast | Wind Direction: SE | Wind Speed: 6mph / 9km/h
Forecast for Saturday as of Jul. 21 11:56 PM MMT
Thunderstorm. High:89 ° F. / 32 ° C.
Forecast for Sunday Night as of Jul. 21 11:56 PM MMT
Mostly Cloudy. Low:78 ° F. / 26 ° C.
This RSS feed URL is deprecated July 21, 2018
In Gaza and Israel, war fears mount despite truce - Yahoo News July 21, 2018
Dan Coats showed what working for Trump means: The doctrine of constant surprises - Washington Post July 21, 2018
Russia calls US charges against alleged spy Maria Butina fabricated; demands release - USA TODAY July 21, 2018
French interior minister to face parliament over Macron's bodyguard - Reuters July 21, 2018
Zimbabwe's President Mnangagwa appeals for racial unity ahead of election - BBC News July 21, 2018
Egypt says Israel's Jewish nation-state law undermines Middle East peace - Reuters July 21, 2018
Biden, mulling 2020 run, calls Trump immigration policies 'one of the darkest moments in our history' - Fox News July 21, 2018
China is waginga'cold war' against the US, says CIA Asia expert - NBCNews.com July 21, 2018
Iran's top leader endorses warning over oil supplies - Washington Post July 21, 2018